Fumana iiCasics Analytics Basics
Cofa yinkonzo eyonwabisayo kodwa eluncedo ebonelela ngezicwangciso ezahlukeneyo zokulandela umkhondo wexesha lokwenyani kwiwebhusayithi yakho. Isicwangciso sasimahla sikuvumela ukuba ulandelele iwebhusayithi ibe nye ukuya kuthi ga kwi-3,000 yokujonga iphepha ngosuku kwaye ikunike ukufikelela kwii-analytics zexesha lokwenyani kubathumeli, abatyeleli besiza, ukwahlulahlulwa, ukukhangela nokunye. Ukuchofoza akukwenzi ngokwezifiso njengeGoogle Analytics, kodwa ukuba ufuna into esele yenziwe kwaye isetelwe ukuqhuba negalelo elincinci elivela kuwe, uKicky unokuba yile nto uyifunayo.
iimpawu zokuphendula komzimba wangaphandle
Enye yezona zinto zibalaseleyo zeClicky luphawu lwe-Spy. Ikuvumela ukuba uhlole abantu njengoko besebenzisa indawo yakho ngexesha lokwenyani. Eli nqaku linokukunika idatha engabalulekanga yomsebenzisi kwindlela abantu abahamba ngayo kwindawo yakho. Ngaba baya apho ufuna ukuba baye kwiphepha ngalinye lokufika? Bahlala ixesha elingakanani? Ngaba bayazifumana izinto abazifunayo? Ukuchofoza akuyikhupheli i-bandwidth yakho, ukuze ungalahli ixesha ulinde ulwazi ukuba lulayishe wena.
Chitha ixesha ubukele iindwendwe zexesha lakho lokwenyani. Umsebenzi wabo ukuxelela okuninzi malunga nendlela eyakhiwe ngayo indawo yakho ngokukhawuleza kunayo nantoni na eyenye. Unokucacisa impumelelo yoyilo kunye neempazamo kwaye uphucule indawo yakho ngokumangalisayo.
Olunye uphawu lweClicky lukuxelela iimetrikhi ezifanayo nezo zikwiGoogle Analytics, kodwa ngaphandle kokukhetha okukhethiweyo kwiGoogle Analytics. NjengoGoogle Analytics, uClicky ubonelela ngokwahlulahlula, okuvumela ukuba umbe nzulu kwiimethrikhi zakho ukuze ufumane iimpendulo ezingcono kwimibuzo malunga neendawo ohlala kuzo kunye namatyala okusebenzisa.
I-Clicky ineentlobo ngeentlobo zeapps kunye nee-plug-ins ongazisebenzisa, kubandakanya iplagi ye-Chrome, ideshibhodi yeWindows, iWindowsPress kunye neewijethi zeDrupal, kunye nekhowudi onokuyidibanisa ngesandla kwiisayithi zakho kunye neeapps ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya kwiFayile yakho iakhawunti yeemetrikhi. (Heck, inekhowudi nakwiisayithi ezindala ezinje ngeMySpace). Abantu baseClicky benze kube lula ukubeka i-Clicky naphi na apho ufuna ukuba khona.
i-furosemide 20 mg kunye nokwehla kobunzima
Ungayongeza njani iMizobo kwiLizwi lamaXwebhu ka-2019
I-Radiyo kaHam yeeDummies Cheat Sheet
Ungayishiya njani ingxelo emva kokuThenga nge-Etsy
Uyiqhuba njani ibhola yebhola ekhatywayo
I-GPI A325 (iAcetaminophen 325 mg)
Utshintsha njani isikhombisi kwaye wenze ukuba iTouch yakho ibonakale kwiWindows 10 yeLaptop
Uyikhangela njani iNkqubo yeDesktop kwi Windows 10
Uzibuyisela njani iifayile kwi-Windows 7
Uyenza njani imifanekiso yeTekisi yokuThengiswa kweNtlalo yeNtengiso
Iifomula zokuSasazwa kweMpazamo ngokulula
ndingathatha i-tylenol kwaye ndicebise kunye
iziphumo ebezingalindelekanga ezivela kwi-lexapro
I-t7 m yeepilisi yexabiso lesitalato
Ipilisi yeorenji gg 257
yintoni i-novox yezinja